# Me Too अभियान नेपालमा- पत्राकारदेखि मन्त्रीसम्मबाट दुव्र्यवहार भएको आरोप ! « News24 : Premium News Channel
# Me Too अभियान नेपालमा- पत्राकारदेखि मन्त्रीसम्मबाट दुव्र्यवहार भएको आरोप !
काठमाडौं, ६ कात्तिक । सन् २०१७ को चर्चित सामाजिक सञ्जाल अभियान ‘मि टु’ (# Me Too) पुनः यतिवेला चर्चामा छ । यौन दुव्र्यवहारको विरुद्ध एक हुन गरिएको यो अभियान एक वर्षपछि पुनः व्युँतदा भारतको राजनीति र फिल्म उद्योगमा मात्रै नभएर नेपालमा पनि प्रवेश गरेको छ ।
हलिउड अभिनेत्री एलिसा मिलानोले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा यौन दुव्र्यवहारमा परेको भए ‘मि टु’ लेखेर आफ्नो अनुभवलाई रिप्लाई गर्न आग्रह गरेपछि धेरै महिलाहरुले आफुमाथि भएको यौन दुव्र्यवहार भएको भन्दै ‘मि टु’ क्याम्पेन नै चलाए । तर त्यसको दुई वर्षपछि भारत हुँदै नेपालमा पनि यो अभियानले प्रवेश पाएको छ ।
बलिउड अभिनेत्री तनुश्रीले कलाकार नाना पाटेकरविरुद्ध दुव्र्यवहारको आरोप लगाएपछि भारतमा यो अभियानले चर्किन थालेको छ । १० वर्षअघि भएको यौन शोषणविरुद्ध तनुश्रीले प्रहरीमा उजुरी गरेकी छन् ।
यो सँगै भारतमा धेरै चर्चित कलाकार, फिल्म निर्माता र अन्य ब्यक्तिलाई पनि यौन शोषणको आरोप लागिरहेको छ । यसका साथै केही दिन देखि नेपालमा पनि यसको प्रभाव देखिन थालेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिको प्रमुख हुँदा स्थापितले आफूलाई यौन शोषण गरेको आरोप पत्रकार एवं अधिकारकर्मी रश्मीला प्रजापतिले लगाएकी छन् । पूर्व सञ्चारकर्मी मीना कैनीले आफूमाथि भएको दुव्र्यवहारको बारेमा नाम नै तोकेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गररेकी छन् । उनिसँगै सञ्चारकर्मी, फिल्मकर्मी तथा डकुमेन्ट्री मेकर सुविना श्रेष्ठले मन्त्रीबाट यौन दुव्र्यवहार भएको पर्दाफास गरेकी छन् ।
यसका साथै विम्मी कालिन्दा शर्मा र अन्य धेरै व्यक्तिहरुले ‘मि टु’ अभियानको बारेमा खुलेरै लेखेका छन् । आफूले भोगेको दुव्र्यवहारका साथै के कस्ता समस्या आएका छन्, जसको बारेमा बताइरहेका छन् ।
यो अभियान यौनजन्य दुव्र्यवहारमा परेका तर सो विषयमा बोल्न नसक्नेहरुका लागि सुरु गरिएको अभियान थियो । यो ट्रेण्ड अहिले प्रभावकारी भइरहेको छ । केही साता अघि यसै ‘मि टु’ अभियानकै कारण अमेरिकी न्ययाधीशमा नियुक्त ब्रेट क्याभानो विवादमा परेका थिए ।